घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; "Cuqui"। हाम्रो सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको क्षमताको बारेमा जान्दछ तर केहि केहि सर्जियो रमोस जीवनी मानिन्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गर्न दिन्छ।
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
सर्जियो रामोस गारिसिया मा जन्मिएको 30 मार्च 1986 मा Camas, Seville, स्पेन मा आमाबाबु द्वारा; Paqui Ramos (आमा) र जोस मारिया रमोस (बुबा)।
उनी दुई जना भाइबहिनीहरू रिन र मरियमसँग ल्याइए। रमाओले एक्सएनएनएक्सको उमेरमा फुटबलको रूपमा फुटबल खेल्छन्।
उनको बचपनको दिनबाटै, रामोसले यो ड्यासिङ र सुन्दर व्यक्तित्व देखेका थिए।
एक बच्चा जो सेल्ल युद्ध लड्ने शहर मा फैलियो को रूप मा, सर्जियो एक ब्वाटर फाइटर बनने मा रुचि राखयो र फुटबल को बारे मा कभी नहीं सिखाया। उसले दिनभरि लड्न सक्छ।
सर्जियो रामोस ब्वाल लडाकुको लागि प्रेम
यसलाई खतरनाक खेलको रूपमा विचार गरिसकेपछि, क्यारियरले रोजगारीको विकल्प लिनुमा तिनलाई आमाबाबुलाई त्याग्नुभयो। यो उनको ठूलो भाइ थियो जसले सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेप गर्यो जुन सर्जियो रामोसको लागि जिम्मेवार छ।
उनको शब्दहरुमा, "जब म जवान थिएँ, मैले एक पटक एक सपनाको क्यारियर गरेको छु। म सधैं एएफ बुल्फायर हुन चाहन्थे तर मेरो आमा मेरो डरलाग्दो ब्वाँसोमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो जेठो भाइ रेनको सल्लाह पछि, मैले फुटबलको लागि रोजगारी खतरनाक छनौट गरे। "
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
तिनको जेठो भाइ रेन (अहिले आफ्नो एजेन्टको रूपमा काम गर्ने) सर्गियोले फुटबलमा प्रयास दिन प्रोत्साहित गरे। तिनका आमाबाबुले एक निजी प्रशिक्षकको लागि व्यवस्थित गरेका थिए जसले उनलाई खेलमा लुकेको प्रतिभा खोज्न मदत गरे।
सर्जियो रामोस व्यक्तिगत प्रशिक्षण
फुटबलमा प्रतिभा को खोज पछि रामोस उनको पहिलो क्लब, एफसी क्यामेरा मा शामिल हो। उनले धेरै युवा पुरस्कार जिते र म्याच साक्षात्कारका धेरै पुरुषमा भाग लिइसकेका युवा युवाहरूलाई उत्कृष्ट बनाइन्।
एफसी क्यामसमा, यो सर्गेगोले उनलाई निकै ठूलो फुटबल प्रतिभा गरेको बताए। यसले बनाएको सेलिलालाई स्न्याप गर्न।
सर्जियो रमोसले आफ्नो सेभिल एफसीबाट आफ्नो क्यारियरको उद्घाटन गरे। यो फिफा Ballon d'Or Gala मा दुवै द्वारा वैध गरिएको थियो। त्यहाँ उहाँले ठूलो क्षमता र 2003 देखाउनुभयो उहाँ अन्तमा पहिलो चालक दललाई बोलाउनुभयो। सर्जियोले लडाइँलाई निरन्तरता दिए, आफैले राम्रो उपलब्धिहरू सुरक्षित गर्दै, सही डिफेंडरको रूपमा सुरुवात लाइनअपमा एक स्थान।
धेरै युरोपियन क्लबहरू उनको प्रगति पछ्याएर उनीहरूको आफ्नो सेभिला दिनहरूमा ध्यान दिए। यसको असाधारण राम्रो उपलब्धिहरूको कारण, सर्जियोले धेरै प्रस्तावहरू पाएका थिए। यो स्पेनिस फुटबल विशाल रियल म्याड्रिड थियो जसले अन्तमा उनलाई खिच्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब उनको इतिहास।
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फेथर: जोसेस मारिया रमाओस (सर्जियोका पिता) सर्जियोको सम्झौता व्यवस्थापनमा एक प्रमुख भूमिका खेल्छ। उनले रियल म्याड्रिडसँग तीव्र वार्तामा मद्दत गरेका छन् जसले डिफेंडरको म्याद्रिस्टे अनुबंधमा सुधार ल्याएको छ। उहाँ 27 मा रियल म्याड्रिडमा आफ्नो 2005 मिलियन यूरो हस्तांतरण को लागी मानिस हुनुहुन्छ। यो उनी किशोरको छोराको लागि रेकर्ड ट्राफिक शुल्क थियो।
सर्जियो रमोस बुबा, जोस मर्फिया रामोसले आफ्नो छोरालाई रियल म्याड्रिडमा देखे
जोस रमोस आफ्नो जवान दिनबाट आफ्नो छोरोको घनिष्ठ चक्रमा बनी रहन्छ।
सर्जियो रमोसले उनको परिवारबाट कुनै बहस छैन भने उसले रियल म्याड्रिडका लागि ओल्ड ट्रेफर्डलाई कुनै पनि समयमा आफ्नो क्यारियर छोड्ने निर्णय गर्दछ - किनभने उनको बुबा एक मैनचेस्टर संयुक्त फ्यान हो। 2013 मा दुई पक्षबीच च्याम्पियन्स लीग बैठक अघि, रमोसले आफ्नो बुबालाई अंग्रेजी फुटबलको लागि थाहा पाए।
उनले आइतबार टाइम्सलाई भने: 'मेरो बुबाले धेरै फुटबल हेर्न प्रयोग गर्यो र उनले मलाई भने जब मेरो बच्चा थियो: त्यसैले र यति संयुक्त राष्ट्रमा खेलिरहेको छ। छोरा, तपाईंलाई एरिक कोन्टाना र डेविड बेखम"।
मातृभाषा:तिनीहरू भन्छन् कि आमाहरू सधैं सही छन्, त्यसैले म्यानचेस्टर संयुक्त प्रशंसकको एकपटक निराशाजनक समाचारको लागि सेट गरिएको थियो जब सर्जियो रमोस 'माम्पले उनको बेटा रियल म्याड्रिडमा रहनेछ।
सर्जियो को आमा, पिक्की रामोस कोर को एक रियल मैड्रिड प्रशंसक हो। उनले, साइडियोको पत्नी रियल म्याड्रिडमा सर्जियोको निरन्तर रहनका लागि धेरै साधन हुन्। जब पनि बर्नबेउले रोसोनेसिन पेरिसले 2015 मा नयाँ र सुधारिएको अनुबंधको इनाम दिने उनको प्रतिज्ञालाई उद्धार गरेपछि मीडियाले रोमोसको असहमति प्रकट गरेको छ।
सर्जियो र पिक्की बीचको ठूलो सम्बन्ध अवस्थित छ।
सर्जियो (छोरा) र Pacqi को (आमा) प्रेम
भाइ: रेन रमोस सर्जियोको ठूलो भाइ हो। उहाँ हाल उहाँका एजेन्ट हुनुहुन्छ जसले आफ्नो क्यारियर प्रबन्ध गर्दछ। यी दिन, उहाँ जोसेज भन्दा सर्जियोको क्यारियरमा अधिक हुनुहुन्छ, उनको बुबाले पहिले ठूलो भूमिका खेले।
सर्जियो रमोस भाइ राइन रमोस
पहिले उल्लेख गरिएको रूपमा, रेन फुटबलमा सर्जियोको संलग्नता बिरुद्ध दिमागी थियो।
बहिनी: मरियम रामोस सर्जियो रमोस को लागि साना र एक मात्र बहिनी छ। उनी आफ्नो भाइको विवाहमा पिलर रुबियोमा साधन थिए। मरियमले आफ्नो वरपरको काम गरे।
सर्जियो रामोस बहिनी। मरियम दुलही को रूप मा, नौकरानी
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
रमोस सेप्टेम्बर 2012 मा पत्रकार / प्रेन्टर पिलर रुबियो संग सम्बन्ध भयो, र यो दुवै मा पुष्टि भयो फीफा Ballon d'Or गला। Pilar Rubio एक प्रसिद्ध टेलीभिजन व्यक्तित्व, अभिनेत्री र एक मोडेल हो। उनी टेलिभिजन नेटवर्क La Sexta को घटनाहरु को कवर को लागि जानिन्छ। उनले धेरै पुरुष पत्रिका मा पनि मोडेल र जस्तै चलचित्रहरूमा देखाएको छ ईसाई र डिस्प्ले, अल्टो वोल्ट, कार्लोइट र एल कैंप सुइट्स, खाना पकाने को क्रीम र अरु धेरै। 2008 र 2009 मा त्यो एफएचएम म्यागजिनको स्पेनिश संस्करणद्वारा विश्वको सबैभन्दा कामुक महिलाको रूपमा चयन गरिएको थियो।
सर्जियो रमोस र पिलर रुबियोले 2012 मा धेरै छोटो सम्बन्ध पछि विवाह गरे।
सर्जियो रमोस वेडिंग फोटो
उनीहरूसँग दुई जना छोराहरू छन्: सर्जियो (जन्मे मई 6, 2014) र मार्को (नोभेम्बर 14, 2015)।
ट्राफीको उत्सवको लागि पारिवारिक समय रामोस र उनको परिवारको लागि खुशीको उचाई हो।
पिलर रुबियो संग उनको निपटने देखि पहिले, सर्जियो रमोस अन्य मोडेल र अभिनेत्री संग सम्बन्ध मा रहेको छ .वे शामिल छ; एलिजाबेथ रेजेस (एक्सएनएक्सएक्स- 2006), केरोलिना मार्टिन (2007), नेरेडा ग्लारोर्डो (2006), अमिया सलामांका (2007) र लारा अल्वाजेज (2009- 2010)
सर्जियो रमोस सम्बन्ध इतिहास- अनर्थ कथा
सर्जियो रामोस पहिले सम्बन्ध सम्बन्धी जीवनको जस्तो हो करीम बेंजमा र गोंजोलो हिगुआन जसले त्याग गर्नुअघि केटीहरु को एकदम आवतजावत गरे। यसको यसको विपरीत विपरीत हैरी केन, डेभीड सिल्वा र पेडोरो रोड्रिजुज.
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -गिटारको लागि प्रेम
संग एक साक्षात्कार मा FourFourTwo, उनले स्वीकार गरे कि परिवारमा रोमान्टिक एक - जब उनको बहिनी र विस्तारित परिवारको तुलनामा।
यसको बारेमा सोध्दा, उहाँले भन्नुभयो, "म आफैंलाई मेरो परिवारको सबैभन्दा रोमांटिक हुन मान्छु। मैले सँधै यो बाहिरको संसारमा व्यक्त गर्न गाह्रो फेला पारेको छु; म गिटारको प्रयोग गर्न कि "
कसरी सर्जियो रमोसले प्रेम व्यक्त गर्दछ
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बुल लडाइँ
रमोस बुल्फफाइटिंग को एक प्रशंसक हो, जो कि उनको गृहनगर मा लोकप्रिय छ, र उनी मडारार अलेलेजैंड्रो टेलावंत को एक व्यक्तिगत दोस्त हो। उनले एक म्याजेडारको केपसँग खेल्न दुवै क्लब र देशको लागि विजय हासिल गरे।
सर्जियो रमोस अझै पनि बुल्फाइटिङ लाग्छ
रामोस एक उत्सुक घोडा aficionado पनि हो। उनी आफ्नो देशी अंडालुसियामा एक स्टड फारमको मालिक हुन् र विशेष गरी अन्डलूसियन घोडाको प्रजननमा समर्पित।
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -एक क्याथोलिक
रामोस हो क्याथोलिक, र एक टैटू छ मरियम जसले आफ्नो बायाँ हातको शीर्ष आधा कवर गर्दछ।
सर्जियो रामोस टैटू मा विश्वास छ
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -टैटू तथ्याङ्कहरू
सर्जियो उनको सरणी शरीर को कला को लागि व्यापक रूप देखि जानिन्छ। उहाँसँग उहाँको शरीरमा मसीहरूको प्रतीक संख्या छ।
सर्जियो रमोस शरीरको टाटा तथ्यहरू
उहाँले हरेक टटू पछि धेरै अर्थ जोड्नुहुन्छ। यी संख्याहरू उहाँका हृदय नजिक हुनुहुन्छ। रमसले नो.ए.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एम.एम.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.एन.ए.ए. यो उनको हात टैटू मा संख्या को अर्थ हो।
सर्जियो रामोस ह्यान्ड टैटू तथ्य
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कारको विकल्प
सर्जियो रमोस जर्मन मोटरमोबाईल निर्माता अडीले आफ्ना कारहरू उपलब्ध गराउँदछन्।
सर्जियो रामोस कार को छनोट
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -शक्ति र कमजोरी
रमोस एक भौतिक रूपले बलियो खेलाडी हो जसले हवामा उत्कृष्ट बनाउँछ, यसको उत्थान र सटीकताको कारणले गर्दा उसलाई सेट-टुक्राहरूमा गोल खतरा बनाउँछ।
सर्जियो रामोस; एकजना मानिस अत्याधिक शक्ति संग
रामोस पनि एक सक्षम, आक्रामक टकलर हो। उहाँ गतिसँग भरिभएको छ, राम्रो प्राविधिक क्षमता, साथै राम्रो वितरण र क्रस गर्ने क्षमता।
स्पेनिश खेल समाचार पत्रको अनुसार ब्रान्ड, फीफाको आधिकारिक रेकर्डहरूले पुष्टि गर्यो कि 2015 मा, रामो 30.6 किलोमिटर प्रति घन्टा स्प्रिन्टिंग स्पीडमा क्लोज गरिएको थियो, जसले उनको समयमा संसारको सबैभन्दा छिटो फुटबल खेलाडी बनाउँछ।
उहाँको कमजोरी तिनको अनुशासनमा छ।
सर्जियो रोसो को कमजोर पक्ष
उसले जेएनएमएक्सएक्स भन्दा धेरै पटक रियल मेड्रिडमा सुरु गरेको क्यारियरलाई पठाइएको छ। यो क्लबको इतिहासमा रातो कार्डको उच्चतम संख्या हो। साथै, रियल म्याड्रिडका लागि यसको अवांछित ला लिगा रेकर्ड। सर्जियो रमाओस ले लागा इतिहास मा सबै भन्दा लाल कार्ड छ। रातो कार्डको लागि उनको माया अनन्त छ।
Kruse 27 मे, 20184मा: 27 अपरान्ह
यदि श्री रामोस थाहा छ कि कुन चेतना हो ... ..
आज आफैले आफैंलाई बिर्सनु पर्छ।
स्पष्ट रूपमा यो केटा एक क्रूर खेलाडीको रूपमा अर्को कथा छ,
म जेडेनको सेप्टेम्बरमा गर्भवती हुनेछु। स्पष्टतः रामोसले एक खेलाडीलाई सब्सट्रेट गर्न र जेडेनलाई आफूले एक खेलाडीको रूपमा आफूलाई मन परेन भनेर सम्झना गर्नुपर्दछ, उनले कल रोसस कार्यबाट सावधानी दिए।
केही मानिसहरू बिस्तारै बदसूरत पार्छन्; Ramos मध्ये एक हो र उसले आफ्नो 38th कार्डलाई खराब व्यवहारको चैंपियन लीग रेकर्डको रूपमा एकत्र गर्नु पर्छ।